Curisyo | Heeshi
Maqaallada uu midkaayo ba tayayntooda ku bixiyo wakhtiyada badan haddii uu qoraa ku noqon waayo ma naqaanno waxa kale ee uu qoraa ku noqon lahaa. Qaamuuska Af-Soomaaliga, ee ay sida hagar la’aanta ah inoo soo gaarsiiyeen buunniyada kala ah, Annarita Puglielli iyo Cabdalla Cumar Mansuur, ayaa “qoraa” ku qeexaya: “Qof buugaag iyo maqaallo la akhristo […]
Xubin maanso ah oo habdhaceeda la garansan yahay ma hawl badna in tix laga sameeyo. Markii uu dhegaystay aleeggadka* “hablo kebdo samaysanaya,” tusaale ahaan, Sayid Maxamed waa kii curiyay tixda ku bilaabata meeriska, “Guulla Eebbahayoow, geel nimaan dhaqin, faciis gacanta haw galin[neey]” (Aw Jaamac, 1974, b.213). Xuseen Dhiqle na waa kii foodleydii weerka ka soo […]
Arbaca, Diseembar 3, 2014 ·	by Idiris M. Cali ·	in Curisyo	· Faallo u dhaaf
IDIRIS: Muddo bil ku dhow ayaan curiskan qalinka dul hayay. Sidii aan kolba erey uga baddalayay waxa uu noqday curis ka soo dhex baxay curisyo dhawr ah, kuwaas oo gebi ahaan tirtirmay. Rajadaydu waa in aan muujiyay (oo aanan gudi karin) abaalka weyn ee ay WardheerNews iyo tifaftirayaasheedu i gashadeen. WardheerNews toban sano ayay baarka […]
Waxaad u’kaadisaaba, ood u kuurgashaaba, mar baad la keentaa. Waxaan liqi kari la’aa aaraa’da ku cabbiran tuducda ugu dambaysa ee jiiftada Af-ku-Siran, taas oo guud ahaan innagu hawadinaysa in aynu garanno, kana soo baxno, doorkeenna dadnimo ee nolosha. Waxaan ku talaqaatay, bilaabayna, qalimidda qoraal aan unkaheeda ku weydiinayo cidda ay tahay, haddayse jirto, ta’ bixin kartaa […]
Marar kala duwan ayaan maansooyin dareen daltinnimeed xambaarsan u tebiyey Soomaalida reer Boston, oo mararkaas isugu soo baxday xusidda 26ka Juun iyo 1-da Luulyo. Xagaagii 2009a* waxaan xushay geeraarka “Kaana siib, kanna saar”; 2010a jiiftada “Dadka waw gu’ weynnahay”; 2011a gabayga “Kontonguuro”; 2012na gabayga “Qayblibaax.” Duunkayga, waxaan maansoooyinkaas u doortay inay yihiin kuwo xul ah […]
Dhigis aan lagu dhafrin
Sabti, Maajo 19, 2012 ·	by Idiris M. Cali ·	in Curisyo	· Faallo u dhaaf
Asteyaasha qoondaysan ee tibxaha afku waxa ay innaga haqabtireen qorista afka iyo far u samayntiisa. Wixii ka dambeeyay soddoniyo-sagaal kal na, farta ay asteyaashanu suubbiyeen guulo badan ayey afka u soo hoysay: Suugaan badan oo lumi lahayd baa kaydsantay; barbaar faraweyn ayaa la soo kortay, oo teer iyo hirgelinteedii wax ku soo qorayey—jiilalka daba-socday na […]